iOS 15.5 beta inovhara ndangariro dzemifananidzo yakatorwa munzvimbo "dzinonzwa" | Nhau dze iPhone
Tony Cortes | 28/04/2022 20:33 | iOS 15, dzakawanda
Apple ichangobva kuita shanduko nyowani yakawanikwa mukati iOS 15.5 beta uye izvozvo zvinogona kuunza gakava. Zvinoitika kuti isu tatora foto pane saiti iyo Apple inoona "inotarisisa," uye inoivharira kuti irege kuoneka muchikamu che "ndangariro" chenzvimbo yeMapikicha app.
Kupokana kuchauya kutanga, nekuti zvakare, Apple inotisarudzira isu, tisingakwanise kushandura maitiro, kusarudza kana tichida kuti chikumbiro risarura kana kwete. Uye chechipiri, kuti ndiyo kambani inosarudza nzvimbo, maererano nemaitiro ayo.
Vhiki rino beta yechitatu yeIOS 15.5 yakaburitswa kune vanogadzira. Ichi chitsva chekuvandudza chinosanganisira chitsva chinounza mutsara, pasina kupokana. Manzana ichavhara mafoto izvo zvinotorwa mu "nzvimbo dzakaoma kwazvo dzevashandisi" uye hazvizovaratidze mu "ndangariro" chikamu cheiyo mafoto application.
«Memories»chinhu cheApps app paIOS uye macOS inoziva vanhu, nzvimbo, uye zviitiko muraibhurari yako yemifananidzo kuti ugadzire otomatiki akaunganidzwa ane slideshow. Sezvo chimiro ichi chakavakirwa pakudzidza kwemuchina, Apple yakaita shanduko kune algorithm yeapp kudzivirira kugadzira zvimwe "zvisingadiwe" ndangariro dzenzvimbo.
Izvo zvaonekwa kuti muIOS 15.5 beta 3 kodhi, iyo Photos app ikozvino ine rondedzero yenzvimbo dzakaoma dzemushandisi, saka chero mafoto anotorwa munzvimbo idzodzo dzakaiswa haambo ratidzike muchikamu che "ndangariro". Sezvineiwo, nzvimbo dzese dzakarambidzwa mune iyi vhezheni dzine hukama ne Kuurayiwa kwevaJudha yeHondo Yenyika Yechipiri.
Rondedzero ine chidzidzo chimwe chete: holocaust yeNazi
Heino rondedzero yenzvimbo dzakavharwa muMapikicha app's Memories chimiro ne iOS 15.5 beta 3:
Yad Vashem Chirangaridzo
Musasa wevasungwa weDachau
Musasa wevasungwa weMajdanek
Belzec musasa wekuparadza
Anne Frank Imba
Sobibor musasa wekuparadza
Treblinka musasa wekuparadza
Chelmno-Kulmhof musasa wekuparadza
Musasa wevasungwa weAuschwitz-Birkenau
Nzvimbo yega yega inopihwa latitude, longitudo, uye radius, saka iyo Photos app inofuratira mifananidzo yakatorwa munzvimbo idzi nekugadzira ndangariro itsva. Ehe, Apple inogona kugadzirisa iyi runyorwa nenzvimbo nyowani neramangwana iOS inogadziridza.
Kupokana kunoitwa. Kutanga, nokuti Apple haina kukutendera kuti usarudze kana mushandisi achida kudzivirira nzvimbo idzodzo kana kuti kwete. Iyo kambani inokumanikidza iwe. Uye chechipiri, sei nzvimbo idzodzo chete, uye kwete zvimwe zvinogona kuenzaniswa se "sensitive", senge nzvimbo yeTwin Towers muNew York, pasina kuenda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » iOS 15.5 beta inovhara ndangariro dzemifananidzo yakatorwa munzvimbo "dzinonzwa".
Apple inogadziridza AirTag firmware pane inotenderera